Tamin’ny herinandro, niantso ny mpanao gazetinay ny rain’ilay zaza fa saika handefa filazana ankizy very tamin’ny haino aman-jery sy ny tambazotran-tserasera. Nandrasana anefa tsy namerina niantso izy. Andro vitsy dia nilaza fa efa hita ilay zaza ary saika hisy hivarotra ka efa mandray an-tanana izany ny zandary eny Fiadanana. Tsy navoaka haino aman-jery mihitsy izany amin’ny mety hampandositra ireo mpiray tsikombakomba amin’ireo olon-dratsy. Omaly talata hariva, navoakan’ny fampitam-baovaon’ny zandariamariam-pirenena Andrefanambohijanahary fa voasambotra olona dimy mpangalatra sy mpivarotra zaza ary mbola misy tafaporitsaka amin’ity raharaha ity. Nandeha ny feo fa misy mpivarotr’olona eto an-drenivohitra, araka ny fampitam-baovaon’ny zandary hatrany. Natao ny vela-pandrika ka mody zandary no mpividy, ary teny amin’ny kianjan’ny Makia Andohatapenaka ny fotoana nifanomezana, ny zoma 8 martsa. Olona roa izy ireo no nitondra ilay zaza efa-taona ary notombanany 10 tapitrisa ariary ka nosamborina avy hatrany. Lehilahy miisa efatra avy eny Ampasika no nahazoany ilay zaza. Nofandrihina ireo teo Andranomanalina, ny sabotsy 9 martsa fa tafaporitsaka. Nanatanterahana vela-pandrika ihany koa ny telo hafa ka azo avy hatrany ary mpihavana avokoa izy rehetra ireo. Naiditra am-ponja vonjimaika izy ireo taorian’ny famotorana sy ny fampanoavana nataon’ny PAC ny
11 martsa teo. Araka ny fampitam-baovaon’ny zandary, voamarina fa ilay very zaza teo Antetezana Afovoany 67ha no ray aman-drenin’ilay zaza ka nampodiana any an-tokatranony.